UMSEBENZI WABATHUNYWA 3 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UMSEBENZI WABATHUNYWA 3UMSEBENZI ... 3
31Ngamhla uthile uPetros noYohane baya *endlwini kaThixo ngexesha lomthandazo, ngentsimbi yesithathu emva kwemini. 2Apho esangweni lendlu kaThixo ekwakusithiwa liSango eLihle, kwakukho indoda eyayisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo. Yayidla ngokusiwa khona yonke imihla ukuze icele amalizo kwabangenayo. 3Yakubona uPetros noYohane bengena, yacela ukuba bayilize. 4Bayijonga, waza uPetros wathi: “Khangela apha!” 5Yajonga kubo ke ilindele into abaza kuyinika yona. 6Uthe uPetros: “Imali andinayo, kodwa ndiza kukunika into endinayo – egameni likaYesu Krestu waseNazarete, ndithi kuwe: ‘Phakama, uhambe.’ ” 7Akuba etshilo, wayibamba ngesandla sokunene, wayiphakamisa. Ngoko nangoko iinyawo namaqatha ayo omelela. 8Yatsho umtsi, yema ngeenyawo, yahamba-hamba. Yaza yangena nabo endlwini kaThixo, ihamba itsiba-tsiba, ibulela uThixo. 9Bonke abantu ababelapho bayibona ihamba ibulela uThixo. 10Baqonda ukuba ngulaa mngqibi wayedla ngokuhlala eSangweni eLihle lendlu kaThixo, bonke bathi manga yinto eyenzeke kuye.
Intetho kaPetros endlwini kaThixo
11Njengoko le ndoda yathi nca kuPetros noYohane, basuka abantu beza begxalathelana kubo bemangalisiwe evarandeni ekuthiwa yekaSolomon. 12Akubabona abantu, uPetros wabhekisa kubo wathi: “MaSirayeli, kungani ukuba inimangalise le nto? Khona kutheni ukuba nisijonge ngathi wenziwe ngamandla ethu nangokwethu ukukholeka kuThixo ukuba ahambe lo mntu? 13UThixo ka-Abraham, kaIsake, kaYakobi, uThixo woobawo bethu, ngesi senzo usinike iwonga isicaka sakhe uYesu. Nina namnikela namkhanyela phambi koPilato, nangona yena wayefuna ukumkhulula. 14Namkhanyela umnyulwa olilungisa! Endaweni yakhe nacela uPilato ukuba anikhululele isihange. 15Nayibulala imbangi yobomi; ke yena uThixo wayivusa ekufeni. Yeyona nto singqina yona ke leyo. 16Kukuvuma nokuzinikela kwigama likaYesu okuyomelezileyo le ndoda niyibonayo, niyaziyo. Ligunya legama lakhe elimenze waphila njengokuba nimbona elapha phambi kwenu nje lo mntu.
17“Ndiyazi ke, mawethu, ukuba nina neenkokheli zenu le nto niyenze kuYesu ngokungazi. 18Loo nto ngoko uThixo wayazisayo ngabo bonke *abashumayeli, yokuba umelwe kukubandezeleka, uyizalisekisile. 19Guqukani ke ngoko, nibuyele kuThixo, ukuze zicinywe izono zenu; 20nize nifumane amathuba okuhlaziyeka komoya evela eNkosini, nokuze imthumele uYesu onguKrestu oselenikwe nina. 21Yena uya kuhlala ezulwini kude kufike ixesha lokuhlaziywa kwezinto zonke, njengoko uThixo wâzisáyo mandulo ngabashumayeli bakhe abanyuliweyo. 22Kaloku uMosis wathi: ‘INkosi uThixo wenu iya kunithumela umshumayeli ophuma kwalapha kumawenu njengam. Maze nimphulaphule kuyo yonke into anixelela yona. 23Nabani na ke ongamphulaphuliyo lo mshumayeli uya kusikwa ebantwini bakaThixo atshatyalaliswe.’Hlaz 18:15,19; Nqulo 23:29 24Abashumayeli bonke ukususela kuSamweli nabo bamlandeláyo, bayixela le mihla sikuyo. 25Nisisizukulwana sabashumayeli, ninenxaxheba kumnqophiso owenziwa nguThixo nooyihlo-mkhulu, xa wathi kuAbraham: ‘Ngesinqe sakho ndiya kubasikelela bonke abantu bomhlaba.’ZiQalo 22:18; 26:4 26UThixo ke esimisele isiCaka sakhe wasithumela kuni kuqala, ukuze anenzele inceba niguquke kwinkohlakalo yenu.”